Bakhala ngenkinga yamanzi e-Willowfontein | News24
Bakhala ngenkinga yamanzi e-Willowfontein
ISITHOMBE: sithunyelweAmalungu omphakathi ematasa ekha amanzi emotweni eletha amanzi kulendawo.
AMALUNGU omphakathi wase-Willowfontein endaweni yase-Bulwer athi awasazi ukuthi kumele enze njani noma akhulume nobani ukuze kuxazululeke inkinga yamanzi kule ndawo.
Amanzi aphela kule ndawo ngonyaka wezi-2016 kuze kube yimanje awakaze abuye.
Lo mphakathi usuphila ngemoto ezithwala amanzi nabathi zibuye zingafiki kuze kuphele isonto.
Ngonyaka wezi-2016 lo mphakathi wateleka wavala umgwaqo ngamathayi avuthayo ukhalela ukungabibikho kwamanzi kule ndawo.
Emva kwesiteleka amanzi abuya kwezinye izindawo ezise-Willowfontein kodwa kwenzinye ezifana nase-Bulwer naKwaPhupha awakabuyi kuze kube yimanje.
I-Echo ivakashele indawo yase-Bulwer ngoLwesihlanu yafica amalungu omphakathi ebeke amabhakede nemiphongolo emigwaqeni elindele imoto ethwala amanzi.
UNkk Thembi Buthelezi (60) ohlala e-Bulwer uthe sekuphele iminyaka emithathu engenawo amanzi emzini wakhe.
“Akuve nginenkinga njengoba sengimdala futhi ngiyagula. Uma izingane zingekho ngiphoqeleka ukuba ngikhongozele amanzi emotweni ethwala amanzi bese ngiwashiya emgwaqeni kwazise ngisindwa ngisho ibhakede elincane eliwu-5 litre.
“Asisakwazi ngisho ukuwasha into esile ngenxa yokuthi sifuna ukonga wona lamanzi angekho. Kwezinye izindawo abuya ngenyanga kaMasingana (January) kodwa kithina awazange abuye,” kubeka yena.
Uqhube wathi enye into eyi nkinga kakhulu ukuthi izimoto zamanzi zifika noma inini azinaso isikhathi ezifika ngaso.
“Uma kungukuthi awukho ngesikhathi imoto yamanzi ifika kusho ukuthi uzohlala ungenawo amanzi.
“Ungabona isiphithiphithi esibakhona uma sekuphele isonto imoto ingafikanga.
Umgwaqo wonke usuke ugcwele uyisinyokotho ngoba abantu basuke sebengenalutho ngempela.
“Singajabula uma nje singathola amanzi ukuze izimpilo zethu zizobuyela esimweni esejwayelekile.”
Elinye ilungu lomphakathi e-Bulwer elingathandanga kudalulwe igama lalo lithe amanzi into asebeyizwa ngendaba lapho behlala khona.
“Inzima impilo esiyiphilayo ngaphandle kwamanzi. Ngeke sikwazi ukuqhubeka siphile kanje kumele kube khona okwenziwayo ukuze sizothola amanzi nathi,” kubeka yena.
UNks Nobuhle Dlamini ohlala khona e-Willowfontein uthe : “Ngiyabazwela kakhulu laba bantu abangawathola amanzi kuze kube yimanje. Ngiyabazi ubunzima nathi esike sabhekana nabo ngesikhathi ehambe i-Willowfontein yonke.
“Sesiside kakhulu lesi sikhathi kanti bona benzeni lena engaka sebengaze bajeziswe ngento eyisidingo kangaka?,” kusho uNks Dlamini.
Ikhansela le ndawo uMnuz Thabiso Molefe uthe indaba yamanzi iyinkinga njengoba naye ehlala KwaPhupha lapho kungekho khona amanzi.
“Senginqume ukuba ngibize umhlangano womphakathi maduze nabantu bakamasipala abasebenza ngamanzi ukuze kube yibona abazochazela umphakathi ukuthi yini inkinga, ngoba mina angisazi ukuthi ngizochaza ngithini.
“Le nkinga isihambe isikhathi ingalungiseki. Nami ngesikhathi ngiqala ukuba ikhansela ngafika le nkinga yamanzi isinesikhathi esicishe sibe ngangonyaka,” kubeka yena.
Uqhube wathi ubengakabi naso isiqiniseko sosuku lo mhlangano kodwa uzoba maduzane.